तलब राेकिने भएपछि धमाधम प्यान लिँदै सांसदहरु
Sat, Dec 14, 2019 at 5:42am
बेलायत चुनाव : भारतीय मूलका १५ सांसद बने, ३ जनाले जिते पहिलोपटक #आहा खबर# योगले मस्तिष्कलाई फाइदा गर्छ, अध्ययनले अरु के-के भन्छ ? #आहा खबर# धेरै खुर्सानी खान किन मन लाग्छ ? पिरो खानु कत्तिको स्वास्थ्यबर्द्धक ? #आहा खबर# सेना चढेको बस दुर्घटना हुँदा ३० घाइते #आहा खबर# अब ब्रेक्जिट समस्याको समाधान सुरू गरौं : बोरिस जोनसन #आहा खबर# धनुषा बम विष्फोट : प्रहरी इन्सपेक्टर दाहालसहित ३ जनाको मृत्यु #आहा खबर# पर्वतमा २१ सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरु #आहा खबर# भूकम्प प्रभावित ७७ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण हुँदै #आहा खबर# मध्यराति धनुषामा बम विष्फोट, एकै परिवारका २ को मृत्यु, इन्स्पेक्टरसहित ४ जना गम्भीर #आहा खबर# चिनबाट दैनिक ४५ टन प्याज भित्रिएपछी मुल्य केही सस्तियो #आहा खबर# किन भयो देशभर हिमपात र वर्षा ? चिसोमा कसरी रहने फिट एन्ड फाइन ? #आहा खबर# नियम विपरीतका होर्डिङ बोर्ड हटाउन शुरु #आहा खबर# सिद्धबाबालाई पुनः ३ दिन निगरानीमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश #आहा खबर# बेलायतमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री जोनसन बकिङ्गम दरबारमा #आहा खबर# सागका पदक विजेता खेलाडीलाई धुमधामकासाथ नगरपरिक्रमा (फोटो फिचर) #आहा खबर#
सोमबार, २७ श्रावन २०७६,	आहाखबर	1.18K
सरकारले तलब लिन प्यान अर्थात् स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेपछि सांसदहरूले धमाधम प्यान लिन थालेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले तलबका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य भएको र नबुझाए तलब रोकिने भन्दै सूचनामार्फत् सांसदहरूलाई सचेत गराएपछि उनीहरुले धमाधम प्यान लिन थालेका हुन्।
‘आधा सांसदहरूसँग पहिला नै प्यान नम्बर रहेछ’, संघीय संसद सचिवालयका लेखा शाखा प्रमूख वसन्तराज सिग्देलले भने, ‘केही सांसदहरूले भर्खरै आफ्नो प्यान नम्बर बुझाउनु भएको छ। केहीले बुझाउने क्रममा हुनुहुन्छ। बीस तीस सांसदले मात्र बुझाउन बाँकी छ।’ सिग्देलले धेरै जसो सांसदले प्यान नम्बर बुझाएको बताए पनि स्रोतका अनुसार अझै पचास प्रतिशत सांसदले स्थायी लेखा नम्बर नबुझाएकाे जनाइएकाे छ।
संघीय संसद सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले सांसदहरूलाई प्यान नम्बर लिने तरिका सिकाउन नोट समेत तयार पारेको छ। प्यान नम्बरबारे बुझ्न जाने सांसदहरूलाई करदाता कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् कसरी फारम भर्ने भन्ने सूचना सचिवालयले दिने गरेको छ।
संघीय संसदमा अहिले ३ सय ३३ सांसद छन्। सरकारी अधिकृत सरह तलब सुविधा पाउने स्वकीय सचिवले पनि तलब बुझ्न अब प्यान नम्बर बुझाउनुपर्नेछ।
यसैबीच सांसदहरूको साउन महिनाको तलब भत्तामा ढिलाइ हुने भएको छ। सांसदहरूको तलब बढ्ने र नबढ्ने अझै निश्चित छैन। पदाधिकारीहरूको तलब बढाउने तयारी भए पनि राजपत्रमा अझै बढेको वृद्धिको सूचना प्रकाशित भएको छैन।सांसदहरूको तलब वितरण भएपछि मात्र संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले तलब पाउँदै आएका छन्।